ADDIS ABABA- Dowlada Itoobiya ayaa la saxiixatey hesiis lagu dhameynayo colaada kala dhexeysay Jabhada Oromada "Oromo Liberation Front" kuwasoo markii hore loogu yeerey iney yihiin urur argagixiso, waxaa sidaas sheegey Talefsihinka dowladu leedahay maalinta Talaadada.
Talaabadaan ayaa lagu sheegey iney kamid tahay mid isbadalada Ra'isal wasaaraha dalkaas wax kaga badalayo hay'adaha dowlada, furayo dhaqaalihii dowladu maamuli jirtey iyo in la hagaajiyo amniga iyo xiriirka caalamiga ah.
Talaabadaan ayaa ku soo beegmeysa xilli rabshado ku dhexmarayaan degaanada ay dariska ku yihiin qowmiyadaha Soomaalida iyo Oramada kuwasoo ay ku barakaceen islamrkaana naftooda ku waayeen dad farabadan.
Ra'isal wasaare Abiy oo kasoo jeeda qowmiyada oramada ayaa isbadaladaan uu sameynayo waxaa uu culeys siyaasadeed kala kulmayaa qowmiyadaha kale ee ku nool dalka Itoobiya kuwasoo ay kamid yihiin Tigreega, Soomaalida iyo Amxaarada.
Ciidamada Militariga ayaa asbuucaan horaantiisa waxaa amar lagu siiyey iney xukunak xoog kaga qaadaan Madaxweynaha DDSI Cabdi Ileey talaabadaan oo sababtey in rabshado ay dad ku dhintaan ka dhacaan magaalo madaxda maamulkaan.
Madaxweynaha DDSI ayaa maalintii shaley ogolaadey inuu is-casilo isagoo xilkii ku wareejiyey Wasiirkiisa Maaliyada talaabadaas oo ay diidey dowlada Federaalka ee Itoobiya.
Cabdi Ileey oo maanta galinkii hore la qabtey ayaa wararka waxay sheegayaan in dowlada dhexe u soo magacowdo Madaxweyne kale DDSI.
Dalka Itoobiya oo ku dhaqma nidaamka Federaalka ah ayaa waxaa uu leeyahay maamulo, hay'dahooda dowlliga ah si toos ah u soo doortaan qofka qabanaya xilka Madaxweynaha.
Afrika 06.08.2018. 01:42
Weeraro loo gaystey xaafadaha Soomaalida ee ku yaal magaalada Labaad ee ugu weyn....
Tillerson oo cambaareeyay Xaaladda Deg Dega ah ee lagu soo rogay Itoobiya
Caalamka 08.03.2018. 22:09
Itoobiya oo dib ugu yeertey 90 diplomaasi [ Sabab]
Afrika 01.10.2018. 20:32
Madaxweynaha dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya oo ku wajahan Addis Ababa [Sabab]
Afrika 06.08.2018. 15:42
Shaqsiyaad maxkamad loo soo taagay isku daygii dilka Abiy Axmed
Afrika 29.09.2018. 12:03
Madaxweynaha DDSI oo ka hadlay sida ONLF hogaanka ku qaban karto
Afrika 03.01.2019. 11:36